Home AKOTKỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKW FOKWỌ AKW FOKWỌ Ndị egwuregwu bọọlụ Dutch Mathijs de Ligt nwata Akụkọ Plus na-enweghị isi akụkọ eziokwu
LB na-egosi Full Story of a Football Genius onye kasị mara aha ya "Onu ogugu". Ụmụaka anyị bụ Mathijs de Ligt Akụkọ na Akwụkwọ akụkọ na-adịghị mma Akụkọ eziokwu na-ewetara gị ihe ndekọ zuru oke nke ihe omume a ma ama site n'oge ọ bụ nwata ruo n'oge. Nyocha a gụnyere ndụ nwata ya, ndabere ezinụlọ, akụkọ ndụ tupu aha ya, ebili na akụkọ a ma ama, mmekọrịta na ndụ onwe onye.
Ee, onye ọ bụla maara na ọ nọ n'etiti ndị na-enwu gbaa na ụwa. Agbanyeghị, ọ bụ naanị mmadụ ole na ole na-atụle akwụkwọ akụkọ Matthijs de Ligt nke bụ ihe na-atọ ụtọ. Ugbu a n’enweghị nsogbu ọzọ, ka anyị bido.
Mathijs de Ligt Nwata Akụkọ nke na - Ndụ mbido na nzụlite ezinụlọ
A mụrụ Matthijs de Ligt na 12th nke August 1999 na nne ya, Vivian de Ligt na nna, Frank de Ligt na Leiderdorp, obodo na obodo dị na ọdịda anyanwụ Netherlands.
N'oge na-adịghị anya a mụsịrị ya, nne na nna Matthijs de Ligt kwagara Abcoude, obodo dị na ndịda Amsterdam. Na-achọ inweta ohere akụ na ụba ka mma, nne na nna gụnyere ụmụ ha zụlitere ezigbo otu egwuregwu Ajax.
Matthijs de Ligt bịara dị ka nwa mbụ ha mụrụ na nwa nwoke na nne na nna ya Vivian na Frank. Mgbe e mesịrị n'oge ọ bụ nwata, mama ya nwere ụmụnne ndị ọzọ, ụmụ ejima aha ya; Fleur na Wouter. Oge niile ruo ụbọchị na-eme ka ndị ezinụlọ Ligt nwee obi ụtọ.
Matthijs de Ligt na-eduzi ụzọ dị ka nnukwu nwanna n'oge na-adịghị anya. Nwanne nwanne ya nwoke, Wouter enwewo obi uto mgbe o nwere nwanne nwoke buru ibu nke ya na ndi ozo kuru ihe kwesiri ya site na nwata.
N'oge ahụ, ụmụnne de Ligt malitere omume nke na-agaghị ekwe ka ibe ha na-awagharị n'ọchịchịrị naanị ha. N'oge ahụ, ọ bụrụ na Ajax na-egwuri egwu, ụmụ nwoke abụọ ga-eti mkpu site n'ọnụ ụlọ ha. Akụkụ nke oge ezumike ha gụnyere ndị mụrụ ha na-akpọrọ ha na-agagharị na ama egwuregwu Ajax (Johan Cruijff Arena) n'oge izu ụka.
N'ihe ndekọ nke onwe gị, a na-ewere Matthijs dị ka onye ga-achọpụta ụmụnne ya abụọ ma ọ dịghị atụ egwu ịlụso ndị isi ike n'ụlọ akwụkwọ.
Dabere na AjaxShowTime, otu n'ime ndị nkuzi Matthijs kwuru otu oge;
Ọ bụrụ na emejọ mmadụ na klas ya ma ọ bụ nwanne ya, Matthijs agaghị eme ihe ọtụtụ mmadụ ga-eme… Nke ahụ bụ "gbapụ". Kama, ọ ga-akwado ndị a na-amaja.
Mathijs de Ligt Nwata Akụkọ nke na - Ndụ Ndụ Mmalite
Ị maara?… Matthijs ahụtụbeghị ọrụ na football na ụzọ ọ ga-aga na mmalite. N'ezie, ihe mbụ ọ na-eme n'egwuregwu na-abịa n'ejighị aka ya karịa ụkwụ ya. Mgbe ọ dị afọ ise, nwa okorobịa bụ Matthijs gosipụtara n'okpuru ebe a ka ọ malite ịgba chaa chaa nke o mere nke ọma.
Olee otú njem njem ya si amalite: N'agbanyeghị na ọ bụ onye na-egwu egwuregwu tennis, Matthijs nwere nsogbu ịkwado ọrụ ahụ. Nke a bụ oge ọ rịọrọ ụzọ ndị ọzọ. Ọ dabara na ya, otu ụbọchị, enyi ya kpọbatara ya na football nke kpọrọ ya maka ọzụzụ. Ozugbo ọzụzụ ahụ gasịrị, Matthijs malitere ịgba bọl ozugbo.
Ọ na-ewe ihe dị ka otu afọ ka ọ banye n'ime egwuregwu ọhụrụ ahụ. Oge a bụ oge o debara aha ya n'akwụkwọ nke òtù ndị ntorobịa ya, FC Abcoude bụ onye nyere ya ohere iji gosipụta talent ya ọzọ. N'oge ahụ, Matthijs ga-enwe nwanne ya nwoke Wouter na-eso ya gaa ememme ụlọ ọrụ.
Mgbe ya na FC Abcoude, o nwere mkpebi siri ike ma lekwasị anya na nrọ ọhụrụ nke ịbụ pro. N'ezie, ọchịchọ ya sochiri ọchịchọ ya site n'ịrụsi ọrụ ike ma ọ bụghị naanị ihe na-agafe agafe. Matthijs na-egwu maka FC Abcoude maka afọ 3 ọzọ, oge ọ na-eme ka nkà ya dị mma ma na-ele anya dị elu.
Mathijs de Ligt Nwata Akụkọ nke na - Ịghọta
Mgbe ọ dị afọ 9, ndị Ajax scouts bụ ndị nwere mmasị n'ebe ọ nọ nọ na-enyocha Mathijs de Ligt maka ihe abụọ. Nke mbụ, ọ bụ onye kachasị mma nke ọgbọ ya. Ihe nke abuo bu n'ihi nnukwu oke ya nke siri ike ma zute ihe ha choro na mbu.
Otú ọ dị, ka oge na-aga, obi abụọ ndị Ajax scouts malitere ịla. Ha tụrụ egwu na Matthijs de Ligt na-ebuwanye ibu karịa ọnụ ọgụgụ nke nwere ike iyi ihe na-adịghị mma n'egwuregwu ahụ. Agbanyeghị, ha tinyere ihe egwu dị ka ha hụrụ na ọ ka nwere ikike ahụ.
Mathijs de Ligt Nwata Akụkọ nke na - Ajax Suarez na-ezute
De Ligt mesịrị nweta ihe ịga nke ọma na Jong Ajax, a kpọkwara Ajax II ma ọ bụ Ajax 2 (ìgwè nke Ajax). Na Ajax, Matthijs ghọrọ nwatakịrị a dị obi umeala ma wezuga onwe ya bụ onye ike ya maka ịmara aha ya dabara n'ụzọ o si eji bọl ahụ.
Dị ka otu ajụjụ ọnụ si kwuo, oge kachasị echefu bụ nzukọ Luis Suarez oge ọ ka nọ na Ajax II.
Ị maara?… Ajax na 2017 n'otu oge kpaliri ụfọdụ n'ime ndị Fans site na ọrụ ọrụ FaceBook. Ndị Dutch ji okwu ahụ mee ihe "N'afọ sochirinụ, n'otu otu”Iji kọwaa foto Matthijs de Ligt na Luis Suarez onye na-egwu na Barcelona n'oge ahụ.
Ọtụtụ ndị Fans Ajax hụrụ nke a na-abaghị uru maka ụlọ ọrụ ahụ na-ezo aka na-enyefe na ọdịdị ahụ. O nwere ike ịbụ ihe mere ọgbakọ ahụ ji ghara ire Matthijs de Ligt ka ọ bụrụ Barca na 2018 niile ka ọ bụrụ na ọ ga-eme ka ọ bụrụ nsogbu nke oge.
Mathijs de Ligt Nwata Akụkọ nke na - Ụzọ Ebube
Matthijs de Ligt bụ ọdụdụ nwa na ngwa ngwa ịrị elu karịa ọkwa ndị ntorobịa nke mere ka ọ bụrụ nkwalite na football football dịka ọ bịarutere nso 17. Nke a mere mgbe ọ meriri ọtụtụ akara dị ka onye na-eto eto na-eto eto.
Ị maara?… Dịka 15, Mathijs de Ligt meriri mmeri ahụ maka onye ọkpụkpọ nke asọmpi n'ememme maka U17 si nakwa na ngwugwu maka U19's. Ọ bụ mgbe ahụ ka ndị ọkachamara maara na ọ ga-abụ onye ọkpụkpọ dị egwu. Ọ na-aga n'ihu na otu afọ mgbe nke ahụ gasịrị, o nwetara onwe ya na-akwalite ìgwè ndị Ajax.
Matthijs de Ligt mere ka ọ bụrụ na ọ na-aga n'ihu FC Emmen on August 8, 2016. Nke a bụ ụbọchị ọ kwupụtara onwe ya nye ndị Ajax Fans site na ịchọrọ ma na -emegharị ike.
Nke ahụ abanyela n'ime ncheta ndị Ajax. Matthijs de Ligt mgbe e nyechara egwuregwu ahụ dị ka onye nke abụọ na-eto eto nke na-esochi Clarence Seedorf.
Mathijs de Ligt Nwata Akụkọ nke na - Na-ewu ewu Akụkọ
Ihe malitere ịmalite ngwa ngwa n'oge mbụ ya nke football ọkachamara nke hụrụ ọganihu ya. Matthijs de Ligt jikọrọ nke ọma na onye òtù Columbian mbụ, Davinson Sánchez iji nye akwa mkpuchi maka Ajax. Nke a na-eduga ndị òtù ya na ngwugwu egwuregwu ndị Europa. Iduzi ndi otu ya ruo n'ikpeazu mgbe ha di nkpa obi nke 17 n'eme ka otuto si n'ogo nile bia.
Matthijs de Ligt n'ụdị yiri nke ahụ Ruben Neves ghọrọ onye ọkpụkpọ kachasị nta mgbe ọ bụla na-arụ ọrụ na Europe, n'ikpe egwuregwu na afọ iri na ụma na 23. Ntozu o gosiputara na n 'ogbako ogbako na n'ihu onu ogugu Manchester United abughi ihe bara uru maka umuaka 17.
Ihe ndi mmadu ji mara Matthijs de Ligt mere ka ndi ozo nke Ajax na-eto eto karie n'etiti ha; Kasper Dolgberg na Frenkie de Jong.
Matthijs de Ligt na-aga n'ihu na-enwe obi ike, obi ike na njikọ ya na ndị Ajax Frog dugara ya ka ọ gafere ndị isi chọrọ maka ndị Ajax ya. Vidio dị n'okpuru gosipụtara ikike idu ndú ya nke mebere ụzọ maka aha onye isi ya. Lelee ruo ọgwụgwụ !!
Debe aha onyeisi ya maka ndị otu ya dugara aha mba. Matthijs de Ligt ghọrọ ọdụdụ ọdụdụ nke ọkachamara n'akụkụ akụkọ ihe mere eme nke bọọlụ Dutch.
Mathijs de Ligt Nwata Akụkọ nke na - Ndụ mmekọrịta
N'etiti onye ọ bụla nwere egwuregwu na-aga nke ọma, e nwere n'ezie akwa egwuregwu ma ọ bụ enyi nwanyị. Nye Matthijs, tupu ya enwee ihe ịga nke ọma, otu nwanyị mara mma enyela ya obi ya.
Ligt dị ka n'oge ederede na mmekọrịta ya na Annick Diekman nwa agbọghọ hockey na-egwu maka HC Athena, otu ụlọ ịgba na Amsterdam.
Annick anaghị atụ egwu ihe ọhụụ ka ọ na-arụkwa ọrụ. Ọ bụ onye gụsịrị akwụkwọ n'ụlọ akwụkwọ ndị na-eto eto na Amsterdam. Akụkọ banyere omume ha bịara ìhè na etiti-2014, oge mgbe ha abụọ bụ ndị obi ha bụ nwata bụ ndị bidoro ịlụ nwoke. Matthijs Ligt nke dị n'okpuru ebe a bụ nanị afọ 15 n'oge ahụ.
N'agbanyeghị na ha nọkọ ogologo oge, Matthijs na Annick emebeghị mkpebi ọ bụla iji dozie. E wezụga hockey na ime ihe, Annick amarawo na ya na Matthijs na-etinye oge dị ukwuu ọbụna tupu ya amara aha ya.
Mathijs de Ligt Nwata Akụkọ nke na - Ndụ nke Onye
N'adịghị ka ndị na-agba ọsọ na-eto eto na-eto eto, Mathijs de Ligt bụ àgwà nke ndụ onwe onye dị iche. Ọtụtụ ndị maara ya na-akọwa ya ka ọ bụrụ onye dị jụụ, onye a na-elegharị anya, onye na-elekwasị anya, onye nwere ọgụgụ isi na onye nwere ọgụgụ isi na nke obi ụtọ, nke mmadụ na onye na-eguzosi ike n'ihe.
Matthijs adịghị amasị inwe mmasị na-enweghị ọrụ ma hụ n'anya na-etinye oge naanị ya onwe ya. Ọ bụrụ na ọ naghị egwu bọl, ọ ga - anọnyere Annick ma ọ bụ ike igwu FIFA ma ọ bụ elee anya na Netflix ụbọchị niile. Ọ bụghị ụdị onye chọrọ ka onye ọ bụla mara ya.
N'oge na-adịbeghị anya, mama ya ga-akwali ya iji nweta ikikere ọkwọ ụgbọ ala ya nke na-arụ ọrụ. Matthijs kwuru na ya inweta nkuzi ịkwọ ụgbọala agaghị adaba na usoro ọzụzụ onwe ya. Kwa ụbọchị, Matthijs na-etinye uche ya mgbe niile na ihe ọ chọrọ iji bụrụ ezigbo onye nchekwa.
Nyochaa: Daalụ maka ịgụAnyị Matthijs de Ligt Nwatakiri Akuko na akuko ihe omuma. Na LifeBogger, anyị na-agbasi mbọ ike maka izi ezi na ịkwụwa aka ọtọ. Ọ bụrụ n'ịchọta ihe na-adịghị mma, biko kekọrịta anyị site na ịza ajụjụ n'okpuru. Anyị ga-eji nkwenye gị kpọrọ ihe mgbe niile.